FANOMPOANA ANTSIKA - FANAPORANAN'NY SUYI SY EXPORT CO., LTD
1.Mikaroha vokatra sy mpanamboatra any Sina
Iray amin'ireo tolotra fangatahana fangatahana an'i Suyi ny fizahana entana any Shina. Izahay dia manana ny fampahalalana feno indrindra momba ny tsena ary misafidy ireo tolotra manararaotra indrindra, amin'ny fikajiana ny takian'ny mpanjifa rehetra.
Manome fanampiana izahay amin'ny:
● mividy entana mivantana avy amin'ireo mpamokatra sinoa
● mitady vaovao ho an'ny mpanjifa amin'ny Internet sy amin'ny fampirantiana indostrialy
● famakafakana ny fizarana amin'ny tsena, fampitahana ny kalitaon'ny entana amin'ny mpamatsy samihafa sy ny tolo-kevitry ny vidiny
● manamarina ny fahamendrehan'ny mpamatsy
Ny fahitana mpamatsy any Shina dia iray amin'ireo teboka lehibe indrindra amin'ny fanaovana orinasa, izay tsy maintsy ampiharina amin'ny fiandohan'ny fananganana orinasanao manokana. Miankina amin'ny mpamatsy izay miankina amin'ny ho avy sy ny fahombiazan'ny orinasa natomboka.
Amin'ny fampiasana ny serivisinay, tsy mila mandany ny fotoananao manokana ianao ary mety hahita risika hanandrana mpamatsy anao.
Ny manam-pahaizana anay dia hahita mpanamboatra azo itokisana ny entana mahaliana anao, hanampy anao hanaiky ny teny fiaraha-miasa (vidiny, teny, fe-potoana fandoavam-bola, sns.
Izahay koa dia manome fanohanana amin'ny fizotran'ny asanao amin'ny alàlan'ny fifandraisana matetika amin'ireo mpamatsy (fanampiana amin'ny fandikana). Ity serivisy ity dia ahafahanao manangona fotoana amin'ny fikarohana sy fifanakalozana mailaka. taratasy miaraka amin'ny mpiasan'ny mpamatsy, ary koa hikarohana fampahalalana momba ny fahamendrehany.
Andraikitra ny fahamatorana. Ny fahombiazana dia kalitao. Ny fatra ambony indrindra dia ny fiezahana.
Izahay dia manao fanaraha-maso ny vokatra isaky ny dingana amin'ny famokarana,
● mba hiantohana ny fiarovana ny famokarana,
● miantoka ny kalitaon'ny vokatra
● arovy ny sarin'ny marika.
Mandritra izany fotoana izany dia manome toky ny kalitao sy ny fiarovana ny vokatra izahay mandritra ny làlan'ny fanaterana ny entana ho any amin'ny toerana alehany. Afaho amin'ny ahiahinao ny kalitaon'ny vokatra sy ny fandefasana azy. Hatolotra anao "an-tànana" tsy lafo, soa aman-tsara ary ara-potoana ny entanao.
4. Serivisy fandikana maimaim-poana
Fandikana matihanina amin'ny ambaratonga mety
Raha mila maso matihanina ianao, mpandika teny any Sina, avy eo ny orinasanay dia vonona hiara-hiasa aminao - efa ela izahay dia niasa tamina asa aman-draharahan'ny masoivohon'ny mpanjifanay tany Sina.
Hanampy anao koa izahay.
Ireo mpandika teninay izay manana ireo toetra:
● fanoherana ny adin-tsaina,
● fahaizana miresaka,
● fitandremana, fahaizana mihetsika tsara amin'ny toe-javatra tsy mahazatra.
Manana traikefa amin'ny asa tsy miankina izy ireo, fifampiraharahana mahomby ary fifampiraharahana vita. Ny serivisy natolotry ny orinasanay dia ahafahanao miara-miasa amin'ny mpiara-miasa sinoa aminao, manangona antontan-taratasy tsara rehefa manondrana avy any Shina, mividy entana mivantana amin'ireo mpanamboatra sinoa na amin'ny tsena ambongadiny sinoa.
Mpandika efa za-draharaha
● Hanome anao fandikan-teny an-tsoratra izahay mba tsy hanahy momba ny endri-tsoratra sinoa!
● Fandikana miaraka: hanome fanampiana maharitra izahay amin'ny asanao any ivelany!
5. Serivisy fanatobiana trano
Ny orinasanay dia manana trano fanatobiana entana any Guangzhou sy Yiwu, afaka mandray sy mitahiry entana izahay. Ny velaran'ny trano fanatobiana entana dia 800 m2, mahazaka kaontenera 20 indray mandeha izy, maimaim-poana ny fitehirizana
Ny orinasanay dia manana ekipan'ny movers azy manokana izay miasa tsara arakaraka ny torolalan'ny mpanjifa. Fitaovana maoderina amin'ny trano fanatobiana entana miaraka amin'ny fitaovana sy fitaovana manokana ahafahanao manao asa isan-karazany. Manolotra tahan-dàlana mahasoa sy fepetra mety izahay, ao anatin'izany ny mety fitahirizana maimaimpoana ny ambim-bokatra mandra-pandefasana azy manaraka ao amin'ny trano fanatobiana entana.
● serivisy kalitao
● ao anatin'izany ny fanodinana entana
● fitehirizana azo antoka
● fanodinana entana sy kaontenera misy fari-pitsipika isan-karazany.
6. Fanaterana entana isan-trano
Mandray anjara amin'ny karazana fitaterana entana izahay, ao anatin'izany "Fanaterana entana isan-trano."
Tsy mila mandany fotoana mitady fiara intsony ianao, manahy ny amin'ny filaminan'ny entana, ny fotoana laniana amin'ny fitaterana.
"Fanaterana entana isan-trano amin'ny entana" - ny tombony azo avy amin'ity serivisy ity dia ny fisian'ny serivisy feno, manomboka amin'ny famindrana ny fitaterana, ny fandefasana hatrany amin'ny toerana misy ny tapakila ary miafara amin'ny fiantohana ny entanao mandritra ny fitaterana.
Ampy izay ny fanaovana fangatahana ao amin'ny orinasanay, ny zavatra hafa rehetra dia hataon'ireo logistianina anay ary hiara-miasa aminao.
Manolotra serivisy fiantohana izahay ho an'ny entana rehetra.
Ny orinasanay dia manana 10taona niainany ho an'ny fadin-tseranana manomboka any Shina ka hatrany Rosia
● manana laza tsara sy ekena eo amin'ny tsena
● fiaraha-miasa maharitra sy maharitra amin'ireo orinasa mpivarotra lehibe any Russia.
Fiarovana, fotoana ara-potoana, fahombiazana, vidiny manintona (oh: fanonerana mivantana amin'ny fanaterana na fatiantoka tara)
Andraikitra ny fahamatorana. Ny fahombiazana dia kalitao. Ny fatra-paniry fatratra
8. fandefasana taratasy fanasana, fanodinana visa
Ny orinasanay dia afaka mandefa fanasana ho anao visa sy fanontaniana hafa hamahana ny fombafomba amin'ny dianao mankany Sina.
ianareo afaka misafidy karazana fanasana ho an'ny fizahan-tany na visa ho an'ny orinasaizany dia hamela fahatsiarovana tsy hay hadinoina tamin'ny dianao tany Sina.
9Fihaonana manokana ao amin'ny seranam-piaramanidina
Suyi dia manome serivisy isan-karazany any Shina.
Ny iray amin'izy ireo dia ny fivorian'ny olona any Shina. Inona moa fa i Shina dia firenena misy olona miteny anglisy farafahakeliny, efa manomboka sahady ny olana eo amin'ny seranam-piaramanidina. Manome anao torolàlana sy mpandika teny izahay rehetra. Hihaona aminao amin'ny seranam-piaramanidina izy ary hanampy anao amin'ny famindrana mankany amin'ny hotely miaraka amin'ny mpamily (miaraka amin'ny mpandika teny)
● hamonjy anao amin'ny olana
● hanamora ny fifanakalozana vola
● fividianana karatra sim
● hijerena ao amin'ny hotely
● hanome ny fampahalalana ilaina voalohany
● hamonjy fotoana sy fanahiana.
Ny mpiasanay dia misy olona avy any Sina sy CIS. Ny olona efa nipetraka elaela tany Chine dia afaka milaza izay halehany, inona no ho hita ary, mazava ho azy, manana fahaizana amin'ny fiteny avo lenta.
Famandrihana efitrano, fihaonana ary alàlan'ny / avy amin'ny seranam-piara-manidina na gara
Afaka manofa efitrano ho anao izahay ary mandamina fivoriana sy escort arakaraka ny fandaharam-potoananao. Avelao hilamina ny fanahinao amin'ireo zavatra kely ireo dia afaka miasa milamina ianao, mamonjy fotoana ary mampitombo ny fahombiazan'ny dianao mankany Sina.
folo.Mpanaraka amin'ny ozinina
Fampirantiana miaraka, fitsidihana tsena sy ozinina manerana an'i Shina
Ny orinasanay dia manome serivisy hitsidihana ireo zavamaniry mpamokatra vokatra ilainao hahafantarana ny fitaovana sy ny refin'ny famokarana, ny fizotry ny famokarana mba hatokisana bebe kokoa ny zavamaniry sy ny vokatra.
Fanohanana koa amin'ny fampirantiana sy tsena hahafantaranao bebe kokoa ny fampahalalana tianao.
Halaminay ny fanontaniana mavesatra rehetra ho anao any Shina.